"Hayi indlela aba bantu abaqalekisiweyo abakhala ngayo, Don Juan! Kodwa iya kubabetha njengesihogo ukuba ... |
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ithiyetha
UDon Juan Tenorio
… Ekuqukumbeleni eli nqaku, abayihlawuli kakhulu imikhwazo yabo ». Ewe, ndivumele ilayisensi yoncwadi. Kodwa ngaba kunjalo Ngo-Okthobha usishiya omnye unyaka kwaye uDon Juan uyabuya. Kwaye mna, phambi kwamathanga (endiwathanda kuphela kwizithambiso) amaqhinga, amadili kunye namaqela ezinxityiso zesiko laseAnglo-Saxon, ndishiyeke neklasikhi yethu yakudala yale mihla. Kwirekhodi, ukuthanda kwam ii-Anglo-Saxons kuyaziwa. Kodwa kukho amasiko angazange andoyise kwaye iHalloween yi.
Ndimvile utata wam amaxesha amaninzi efunda esi siqalo kunye nezinye iivesi ezivela kwiTenorio. Bade bawazi wonke umsebenzi kuba babenze bafunda esikolweni. Okokuba, xa umncinci kwaye abazali bomelele kwaye banobulumko, kuhlala kuwe. Emva kwexesha, ufunda ukufunda nokuthanda ezo ndinyana kunye nebali lendawo yonke yothando, imbeko, inkohliso, ubuxoki nenkululeko eqale yabonakalisa. UTirso de Molina kwiqhinga lakhe laseSeville kwaye kamva wenza ukuba uJosé Zorrilla angafi. Bade bashiye ingqushu sele ikhona.
Iinguqulelo zemidlalo yeqonga
Ndibonile ukubonakaliswa okuninzi kweTenorio kumabonwakude kwaye uphile. Ukusuka kwelona klasiki icwangciswe kwiintsomi I-RTVE Isifundo 1 -enye yePaco Rabal njengoDon Juan kunye noConcha Velasco njengoDoña Inés ayilibaleki- nokuba yeyona gadi iphambili. Ndikhumbula enye ngokukodwa kwifayile ye- Umnyhadala weAlmagro Classical Theatre 2003. Kwakunjalo Inkohliso yaseSeville. I-CNTC, ekhokelwa ngu UCarlos Hipolito, beka abaphulaphuli ngeenyawo ngobo busuku bushushu basehlotyeni.
Inguqulelo yokugqibela endiyibonileyo ibingunyaka ophelileyo. Kwabaqhekezi. Okanye kucingelwa. Kwakungu-el montage weqonga kunye nomlawuli uBlanca Portillo, eyajika abalinganiswa baba nguMad Max badass. Wayefuna nokumnika inkcubeko kwaye ichanekile kwezopolitiko. Ke ngoko, wazisa uDon Juan njengesikhohlakali, intsholongwane kunye nolwaphulo-mthetho, eyona nto imbi kakhulu (wafumanisa umpu, ewe) ukuba akakufanelanga ukuba ngumfuziselo wesizwe othandanayo. Kodwa injongo yayikukuba ugcine ivesi yokuqala. Kwaye loo nto ingundoqo, ayinakuguqulwa. Abadlali benze konke abanako, ewe, enye into kukuba ihambe kakuhle.
Ngapha koko, mna, yintoni Ndivela kwisikolo esidala, Ndikhetha ii-ruffles, ii-crinolines, iintsiba kunye neenkemba, ndiza kwenza ntoni. I-Tenorio inokuba nemifanekiso eliwaka yazo zonke iimilo kunye nemibala, kodwa ukuba ijolise ekukhutsheni ubungakanani bayo, ayizukuphinda ibe yile nto yabhalwa nguZorrilla. Iintsomi kufuneka zijongwe ngombono, kwimeko yazo. Kwaye ziyintsomi ngokuchanekileyo ngenxa yaloo nto, ngenxa yendalo iphela yeekhonsepthi ezimele zona.
Amathanga kunye neZombi?
Ke, iminyaka embalwa kule nxalenye (eyaneleyo), ngolu tyekelo ukuza kuthi ga ngoku kukuzijonga emagxeni ethu kodwa ukuntywila kumasiko aphesheya, Saqala ukungenisa amathanga, icobwebs zedonje, isiporho seglue, kunye nezicengcelezo ezinje ngothando kunye nokucaciswa "njengokukhohlisa okanye ukunyanga". Siqala ukuzenza ngathi ... nantoni na okanye sijike sibe ziZombi. Lumka, kubonakala kum kulungile ukuba, njengoko bekusoloko kunjalo kwihlabathi, sikhanyisela ukugqitha kwaye sihleka uloyiko olwahlukeneyo, ngakumbi olo lokufa.
Isiqwenga - UDon Juan Tenorio
Solo Ndiyakhalaza ukuba akukho mntu uziguqula njengoDon Juan, okanye uDon Luis Mejía, okanye uCaptain Centellas, okanye uCiutti okanye u-bawd Brígida. Abo kuthi banomoya othile we-Doña Inés, hayi ngenxa yemikhwa, kodwa ngenxa yokuthanda izikhohlakali, bayamkhumbula. Ngomdlalo onika kakhulu imifanekiso yethu. Kwaye ngokoyikeka. Ukuxabana ezitalatweni phakathi kwamadoda angenakrele anekrele, ingqumbo, ukubulala, amangcwaba kunye nezibuko ezifuna ukukusa esihogweni kunye nomphefumlo ococekileyo nothando oya kukuhlangula. Urhwebo lwamanye amathanga ...
Ke ngoko, ndiyazivumela ukuba ndize apha cebisa ukufunda okanye ukuphinda ufunde yale klasiki. Ukuyixabisa kwakhona, uyonwabele, wonwabele ulwimi olungasasetyenziswayo, olulibalekileyo, ukwazi ukuba sakuba sithethile kanjalo kwaye sinjalo. Kungangcono okanye kubi. Imeko yomntu ayitshintshanga kangako oko salapha. Kwaye mhlawumbi ii-donjuanes zangoku zi-amateurs kwaye kufanelekile ukuba ziphonononge utitshala. Hayi, kunoko, mhlawumbi babi kakhulu kunaye.
Ekugqibeleni kwakhona Ndibhekisa ku Oku kubhaliwe Ngu-Arturo Pérez-Reverte. Ngelo xesha, ndandirhuma yonke ikoma awayeyifaka kwaye ndiyaqhubeka ukwenza njalo. Ke omnye unyaka ndibheje kuDon Juan.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Ithiyetha » «Zinjani ezo zikhalazo ziqalekisiweyo, Don Juan! Kodwa umbane ombi wabahlula ukuba ...
IiDon Juanes zanamhlanje zisenokungazi nokuba livela phi igama.
Abasayi kuze beve iivesi ezidumileyo eziphelisa ukumelana neDoña Ines; mhlawumbi ingelosi yothando kuphela elunxwemeni ...
Kum, nangona kunjalo, njengomfundi olungileyo wesikolo soonongendi, ndithanda ngakumbi iivesi apho u-Doña Ines elahla khona isimilo nobomi ngenxa yothando.
«Don Juan! Don Juan! Ndiyambongoza
okanye ukukrazula intliziyo yam,
okanye undithande, kuba ndiyakuthanda. "
Usizi malunga nesiphelo, eswele kuphela ikwayari yeengelosi eziculayo, kodwa ewe ngaphandle kwesonto "isiphelo esihle" andicingi ukuba ngekwenziwe iminyaka emininzi kangaka.
U-Isabel, undinike la stanza endisithandayo, mhlawumbi sesinye sezona ndizithanda kakhulu kuwo wonke umsebenzi. Iya kuba kungenxa yokuba nam ndivela kwisikolo sonongendi, heh, heh. Enkosi ngengcaciso yakho.
Ay don Juan, yeka ingqesho yonyaka entle esinayo nawe. Uhambo oluhle kakhulu lukaDon Juanes osenzileyo, ukhumbula uMariola. Ndiyazonwabela iinguqulelo zakudala ngakumbi kodwa ukuba ezangoku zenziwe ngentlonipho, hayi ngenxa yovavanyo olukhulu kunye nolwanamhlanje, ndiyazonwabela kwasekuqaleni kuye esiphelweni. Kwaye loo mphefumlo weDoña Inés owuthweleyo ngenxa yencasa yakho yesikhohlisi undenze ndancuma, 😉, kwaye ngubani ongazange? Ndicinga ukuba ndiza kuphinda ndifunde ezinye iivesi ezivela kuDon Juan.
UDon Juan ngonaphakade!
Udliwanondlebe noMarcos Chicot, 2016 I-Planeta Award finalist